BricMaker कथा |
स्थानीय अवस्था अनुसार उपयुक्त भट्टा कसरी छनौट गर्ने?
हाल चीनमा पापयुक्त माटोको ईट्टा र टाईलहरू बनाउनका लागि मुख्य भट्टीहरू सुरु kil भट्टा र रोटरी भट्ठा हो (घुम्ने सुरंग भट्टा)। सुरुnel भट्टिको बिभिन्न प्रकार छन् र तिनीहरूलाई बिभिन्न विशेषताहरूको आधारमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ: यसलाई ठूला क्रस सेक्सन ट्युनको रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ ...
कसरी उचित भट्टा डिजाईन गर्ने?
भट्टाको डिजाइन व्यावहारिक र उत्तम छ, यो सीधा लगानीकर्ताहरु लाई सीमित गर्दछ र भट्टाको गुणस्तर पनि सीमित गर्दछ। बिभिन्न उत्पादन लाइनहरू बिच धेरै तुलनाका माध्यमबाट हामीले पत्ता लगायौं कि समान प्रकारको कच्चा माल र समान प्रकारको किलो ...